हामी कहाँ छौं ? हाम्रा चेलीहरु अफ्रिकाको डान्सबारमा नाङ्गै नाच्न बाध्य छन् « Janata Samachar
प्रकाशित मिति :5May, 2019 4:11 pm
हामीले पानी जहाजको कुरा गर्छौँ, रेलको कुरा गर्छौँ तर मान्छेको कुनै छलफलका कुरा गर्दैनौँ । हामी चाडैँ यसमा छलफल गर्ने सकेनौं भने हामी फर्किनै नसकिने दलदलमा फस्छौं । हामीले भनेको कुरा ब्यबहारमा लागु गर्नुपर्छ ।
दुनियाभरका मानिसले हामीलाई आशाको नजरबाट हेरेका छन् । कम्युनिष्टको इतिहासमा हामीले अहिले प्राप्त गरेको बहुमतत र जनअभिमतलाई सदुपयोग गर्ने ठूलो अवसर छ ।
हामी कता र कुन ठाँउमा छौं चित्रण गर्नुपने अवस्था रहेको छ । हामीले प्राप्त गरेको जनअभिमतलाई सदुपयोग गर्न सकेनौं भने हामीलाई समाजवादले धिक्कार्ने छ । कम्यूनिष्ट पार्टीलाई जुन अभिमत प्राप्त भएको छ त्यो चान–चुने क्ुरा होइन । र यसको सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
पार्टी अहिले तस्कर, दलाल र पुँजीवादको चपेटमा फसेको छ । जसकारण सैद्वान्तिक समस्यामा परेको छ । गुट र उपगुटमा फस्नुको कारण पनि यहि हो । यसरी नै पार्टी अघि बढ्यो भने कम्युनिष्टले क्रान्ति र केही उपलब्धी बाँकी रहँदैन ।
क्रम्युनिष्ट पार्टी दलाल र पूजीँवादबाट निस्केर एउटा सैद्वान्तिक अवस्थामा जानु पर्ने आवश्यकता छ । तब मात्र कम्युनिष्टले लिएको समृद्व र समाजवादको नारा सफल हुनेछ ।
(कार्ल मार्क्सको २ सय १ औँ जन्मस्मृति कार्यक्रममा राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)
अरूलाई सम्मान गर्ने अनि अरूलाई पनि समान ठान्ने चरित्र समाजवादी चरित्र हो ।
कागजी विकासमा रमाउने ओली शासनलाई थप मजबुद गर्न भट्टराईलाइ सत्तारोहण गराएर किनाराका साक्षी मात्रै बनाउन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले त्यसैका लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणा ल्याएको हो ।
प्रतिनिधिलाई चेतना भया !
संघका होउन् कि प्रदेशका, हाम्रा प्रतिनिधि अकल्पनीयसँग हलुङ्गा भए ।